Ukhuza eyamakolishi mbumbulu uNkonyeni | News24
Ukhuza eyamakolishi mbumbulu uNkonyeni
UNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu Natal uNkk Peggy Nkonyeni uthi abazali abaxwaye amakolishi mbumbulu ngalesikhathi sonyaka.PHOTO: sithunyelwe
UMNYANGO wezeMfundo KwaZulu Natal usuqwashise abazali babafundi abazobhalisela imfundo ephakeme kulo nyaka ukuba baqaphele amakolishi mbumbulu, njengoba kungasezinsuku zatshwala kuvulwe izikhungo zemfundo ephakeme.
UNgqongqoshe wezeMfundo kule sifundazwe uNkk Peggy Nkonyeni uthe kubalulekile ukuba abazali baqikelele ukuthi lezo zikhungo abasuke befaka kuzona abantwana babo zibhalesiwe ngokusemthethweni ngaphansi kwe-South African Qualifications Authority (SAQA) no Mnyango weMfundo ePhakeme.
Uthe kujwayelekile ukuthi labo abasuke befuna ukubhalisela imfundo ephakeme bazithole sebeyizisulu zala makolishi mbumbulu, ngenxa yokuthi sebefuna izikhala zokufunda ngokushesha.
Exwayisa abazali nabafundi uNkonyeni uthe: “Unyaka no nyaka abazali babafundi bazithola bekhokha izimali ezishisiwe kulezi zikole namakolishi mbumbulu, yingakho kubalulekile ukuthi ngaphambi kokubhalisa, baqinisekise no SAQA noMnyango weMfundo ePhakeme. Sekukaningi abantu bakithi bezithola beyizisulu zalamakolishi, yingakho kubalulekile ukubaqwashisa ukuthi bangazitholi benza into eyodwa njalo njalo.
“Ikusasa lezingane zethu libalulekile, ngakho kubalulekile ukuthi siqinisekise ukuthi livikelekile ukuze bakwazi ukufeza amaphupho abo. Labo abazobhalisela ezikhungweni ezizimele kumele baqinisekise ukuthi kuleli fomu lokubhalisa zikhona zonke izifundo abazozenza futhi nekolishi ligunyaziwe ukuzifundisa . Uma kunesifundo esingekho kuleli fomu kepha esifundwayo kuleso sikhungo, abafundi kumele bazi ukuthi leso sikhungo asigunyaziwe ngokusemthethweni ukufundisa leso sifundo.”
Abafundi abafisa ukubheka ukuthi izikhungo ababhalise kuzo zibhaliswe ngokusemthethweni, bangavakashela i-website yo Mnyango weMfundo ePhakeme ku www.dhet.gov.za noma bafonele u 0800 873 2222.